U Diyaargarowga Aafooyinka Dabiiciga ah: Hore iyo Dambe
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Ammaanka » U Diyaargarowga Aafooyinka Dabiiciga ah: Hore iyo Dambe
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • jiga • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Sanadkii la soo dhaafay, 2020, ma ahayn oo kaliya sanadkii ugu horreeyay ee masiibada COVID-19, laakiin waxay sidoo kale aragtay kor u kaca duufaanno waaweyn iyo masiibooyin kale oo dabiici ah sida dabka kaynta adduunka oo dhan.
Sannadka 2021 -ka ayaa na baray mar kale in wax walba mar walba ka sii dari karaan. Dalka Mareykanka, New Orleans iyo magaalooyin badan oo dalxiis oo ku teedsan Xeebta Gacanka waxaa ku baaba’ay mid ka mid ah duufaannadii ugu xumaa ee dunida soo mara.
Galbeedka, dabka kaynta ayaa xiray qaybo ka mid ah harada Tahoe ee dunida caanka ka ah.
Qeybaha kale ee adduunka ayaa sidoo kale ku dhibtooday Yurub Giriigga wuxuu arkay xilligii dabkii ugu xumaa ee kaymaha, iyo dalal badan oo Yurub ah ayaa la kulmay daadad daran.
Dhacdooyinkan cimiladu waa inay noqdaan kuwo baraarujinaya qof kasta oo ka tirsan warshadaha dalxiiska. Dabeecadda hooyada ayaa si weyn u caddeysay in safarka & dalxiisku ay yihiin warshado aad u jilicsan. Waa warshad inta badan ku xiran cimilada.
Badanaa, dhaqaalaha dalxiiska iyo faa'iidooyinka ayaa naxariis u leh dhacdooyinka dabiiciga ah. Tusaale ahaan, Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka ayaa badanaa ku jira naxariista xilliga duufaanta. Gobolka Baasifigga, dabaylahaan baaxadda leh ee badweynta keenay, oo badanaa loo yaqaanno duufaannada, ayaa sidoo kale u dhinta. Qaybaha kale ee erayga, waxaa ka jira qabyo iyo fatahaado, dhulgariirro iyo sunaamis iyo waxyaalahan loogu yeero masiibooyinka dabiiciga ah waxay waxyeello u geysan karaan warshadaha dalxiiska. Ka dib masiibo dabiici ah in badan oo ka mid ah warshadaha dalxiiska, soo kabashadu aad bay u xanuunsan tahay iyadoo ganacsiyada ay wajahayaan musalafnimo iyo dadka shaqooyinkooda waaya. Sababtoo ah masiibada COVID-19 meherado badan ayaa awoodi waayay sidii hore si ay si fudud uga soo kabtaan masiibo dabiici ah. Nasiib darro, ma xakamayn karno cimilada ama xaaladaha cimilada, laakiin waa fikrad wanaagsan in loo diyaar garoobo dhulgariirrada, duufaannada iyo duufaannada/duufaannada ama dabka kaynta ka hor intaysan dhicin.
Si lagaaga caawiyo diyaarinta waxaan soo jeedinayaa talooyinka soo socda.
-In la diyaariyo qorshayaal inta aysan musiibooyinku dhicin. Sugitaanka ilaa duufaanku ku dhacdo waa goor dambe si aad u bilowdo ficil. Samee qorshe degdeg ah kahor. Qorshahani waa inuu noqdaa mid wajiyo badan leh waana inuu ku jiraa daryeelidda kuwa laga yaabo inay waxyeelloobto ama xanuunsato inta ay musiibada jirto, raadinta hoy loogu talagalay dadka soo booqda, go'aaminta cidda hudheellada deggan iyo kuwa aan degganayn, abuurista xarumo isgaarsiineed.
-Ku fakar qorshaha ganacsiga soo -kabashada iyo qorshaha suuq -geynta ka hor inta aysan musiibadu dhicin. Markaad ku dhexjirto masiibo dabiici ah waxaad noqon doontaa mid aad u mashquulsan si aad u horumariso ceel inta lagu jiro qorshaha raysashada. Waqti u qaado inaad qorsheysato markay arrimuhu yareeyaan fowdo waxaadna leedahay dulqaad iyo waqti aad kula falgasho dadka kale sida waaxda dab -damiska, waaxda booliska, saraakiisha caafimaadka, iyo khubarada maareynta xaaladaha degdegga ah. Baro dadkan magacyadooda oo hubi inay yaqaanaan qofka aad tahay.
-In la abuuro xiriir shaqo oo wanaagsan oo dhex mara ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo hay’adaha dowladda. Kahor intaanay musiibo dhicin, hubi inaad taqaano magacyada saraakiisha dawladda ee laga yaabo inaad u baahato inaad u tagto. Ka gudub qorshayaashaada dadkaan oo hel fikradooda ka hor dhibaatada.
-Ha iloobin in masiibooyinku ay inta badan yihiin fursado danbi. Hubi in waaxda booliisku ay qayb ka tahay qorshaha musiibada, ma aha oo kaliya dhinaca fulinta sharciga laakiin sidoo kale dhinaca xiriirka dadweynaha iyo soo kabashada dhaqaalaha. Waxa ay waaxda booliisku sheegaan iyo sida ay ula dhaqantaa dadka soo booqda ayaa saamayn ku yeelan kara soo -kabashadaada iyo warshadaha dalxiiska ee deegaanka sanadaha soo socda.
-In la horumariyo isgaarsiin wanaagsan oo dhexmarta hay'adaha jawaabta ugu horreeya. Xirfadlayaal badan oo dalxiis ah ayaa si fudud u malaynaya inay jiraan xiriir shaqo oo wanaagsan oo ka dhexeeya hay'adaha maareynta musiibooyinka ee federaalka, gobolka, gobolka ama deegaanka. Badanaa xaalku sidaas ma aha. Wadashaqayn la'aanta interagency ayaa si xun uga tarjumaysa ganacsigaaga dalxiiska ama bulshada. Tusaale ahaan, Intaas waxaa dheer, inta badan hay'adaha bilayska looma tababarin boliiska ku wajahan dalxiiska mana haystaan ​​wax fikrad ah sida loo maareeyo baahiyaha gaarka ah ee warshadaha dalxiiska xilliyada dhibaatooyinka.
-In la sameeyo borotokool si wax looga qabto macluumaadka qarsoodiga ah. Tusaale ahaan, haddii ay jirto xaalad degdeg ah, hoteellada ma iska kaashan doonaan oggolaanshaha magacyada martida in la sii daayo? Hadday sidaas tahay, xaaladdee bay ku jirtaa? Goorma ayay tahay in la siidaayo diiwaanada caafimaadka maxay tahay mas'uuliyadda warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah ee khuseeya asturnaanta iyo arrimaha caafimaadka dadweynaha?
-In la sameeyo borotokoollada nadiifinta amniga. Inta lagu jiro waqtiyada musiibooyinka, dhammaan noocyada kala -goynta sharciga ayaa laga yaabaa in loo baahdo. Mar haddii masiibadu dhacday, waa goor dambe in la bilaabo xallinta arrimaha sharciga. Samee liis hadda oo hel fasaxyada lagama maarmaanka ah inta lagu jiro muddooyinka xasilloonida. Si taas la mid ah, u gudub dadkaaga caafimaadka dadweynaha waxa siyaasadaha noqon doona haddii ay tahay in la dhaqan geliyo siyaasadda kala -soocidda.
-Dunidaan musiibada ah ee socota, waxaa lama huraan ah in wakaaladaha dalxiiska ee maxalliga ah ay horumariyaan siyaasadaha caafimaadka dadweynaha booqdayaasha oo ay baahiyaan. Haddii ay dhacdo daadad, dhulgariirro ama masiibooyin kale oo dabiici ah dhammaan noocyada dhibaatooyinka cusub ayaa soo bixi kara. Booqdayaasha waxaa laga yaabaa inay lumiyaan dawadii oo aysan awoodin inay helaan beddello, dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan rabin in dhibaatooyin caafimaad oo gaar ah ay ka mid noqdaan diiwaanka dadweynaha. Soo-booqdeyaashu waxay yeelan doonaan welwel aad u sarreeya marka loo eego haddii ay guriga joogi lahaayeen waxaana laga yaabaa inaan filayno inaan aragno heerar ka sii badan oo ah dhibaatooyin caafimaad oo walaac ku keenay.
-Waxaad ogaataa ama qorshe leedahay haddii warshadaha dalxiiskaagu daboolayo aag goboleed ama dhinacyo badan. Mar kasta oo ay suurtogal tahay, samee xeerka anshaxa iyo xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya hay'adaha, hoteellada, maqaayadaha, hoyga degdegga ah, iyo hay'adaha kale ee gargaarka ee ka tallaaba magaalada, gobolka, gobollada ama xuduudaha gobolka.
-Hubi inaad haysato taleefan lacag la'aan ah ama adeeg internet ah oo soo bandhig halka ay booqdayaashu tegi karaan si ay u isticmaalaan adeegyadan haddii ay madoobaan. Soo -booqdayaashu waxay rabaan inay soo wacaan oo kuwa ay jecel yihiinna waxay rabaan inay soo wacaan. Sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, samee nooc ka mid ah isgaarsiinta bilaashka ah. Soo -booqdayaashu waligood ma illaawi doonaan falkan marti -qaadka ah.
-In si toos ah loo bilaabo barnaamijyada soo-kabashada dalxiiska muddada-dheer. Barnaamijyadan muddada dheer waa inay ka fogaadaan si fudud suuqgeynta aagga ama bixinta qiime hoose. Barnaamijku waa inuu sidoo kale ku daraa waxyaabo ay ka mid yihiin la shaqaynta xirfadlayaasha caafimaadka maskaxda iyo u samaynta tas -hiilaad taageero dadka soo booqda ee dhacda badbaadayaasha. Marka booqdaha uu ka tago aagga ay saamaysay, isaga/iyada ayaa sii wadi doonta inay la dhibtoonaato masiibada dabiiciga ah. Hel magacyo, cinwaanno emayl iyo lambarro taleefan oo hubi in booqdayaashaadu helaan wicitaano dabagal ah. Wicitaanadani waa inaysan waligood wax iibin laakiin si fudud u ogeysii booqdayaasha inay hay'addaadu danaynayso iyaga.
Qoraaga, Dr. Peter E. Tarlow, waa Guddoomiye-ku-xigeenka Shabakada Dalxiiska Adduunka oo uu hogaamiyaa Dalxiiska Nabdoon barnaamijka.